posted by မြင့်ဇေ @ 8:39 AM 1 comments
posted by မြင့်ဇေ @ 12:29 AM 1 comments
posted by မြင့်ဇေ @ 10:26 PM0comments
သဘောင်္စထွက်တော့ ကမ်းပေါ်က လက်ပြနေသူတွေက အများကြီး.. အဲဒီထဲက လက်ဖ၀ါးလေးတခုတည်းကိုပဲ ကျနော်ကရွေးမြင်နေမိတယ်။ (ဆက်ရန်)
posted by မြင့်ဇေ @ 11:14 PM 1 comments
အိုင်ဒီပီ (Internal Displaced Persons) ဆိုတာကို ပြည်တွင်းအိုးအိမ်မဲ့ ရွှေ့ပြောင်း နေထိုင်သူများ လို့ မြန်မာမှုပြုကြတယ်။ နအဖစစ်အစိုးရရဲ့ ပြင်းထန်တဲ့ ထိုးစစ်တွေ၊ သနားအကြင်နာကင်းမဲ့တဲ့ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေ၊ လုပ်အားပေးခိုင်းစေမှုတွေ ကြောင့် ကိုယ့်ဇာတိရပ်ရွာထဲမှာလည်း နေလို့မရ၊ပြီးတော့ နယ်စပ်ဒုက္ခသည်စခန်းတွေဆီ သွားဖို့ကလည်းဝေး၊ ဇာတိမြေကိုလည်း မခွဲနိုင်တာကြောင့် မိသားစုပိုင် ဆိုင်မှုတွေကို ပလိုင်းထဲထည့် ကလေးငယ်တွေကို ကျောပိုးပြီး တောထဲတောင်ထဲမှာပဲ မိသားစုလိုက်လှည့်လည်နေထိုင်နေတဲ့သူတွေပါ၊ အဲဒီလို လှည့်လည်နေထိုင်နေရင်းမှာပဲ နအဖစစ်တပ်နဲ့တိုးရင် အသတ်ခံရပါသေးတယ်။
လူမသိသူမသိ သေဆုံးရတဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေ၊ ပမာဏတွေလည်း သေချာမသိရပါဘူး။ အဲဒီလို နေထိုင်သူများဟာ ကရင်ပြည်နယ်တခုထဲမှာကိုပဲ အဲဒီလို ရွာရှောင်ရွာပုန်းနေနေရသူဟာ ၅၀၀၀၀ ကျော်ကျော်လောက်ရှိမယ်လို့ ကုလသမဂ္ဂက ခန့်မှန်းပါတယ်။ အဲ့ဒီထက်တောင် ပိုနိုင်ပါသေးတယ်။
သူတို့ကို အဓိက အကူအညီပေးနေတာကတော့ ဒေသခံ ပြောက်ကျားတပ်တွေ၊ နယ်စပ်ဒေသ အခြေစိုက် နယ်လှည့် ကျောပိုးအိတ်ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေ၊ နောက် ဖရီးဘားမားရိန်းဂျား (Free Burma Rangers) အဖွဲ့ စတာတွေဖြစ်ပါတယ်။
လူမမြင်နိုင်တဲ့ နေရာတွေမှာ သူတို့က နေတာများတဲ့အတွက် တောထဲတောင်ထဲမှာ လိုက်ပြီး အကူအညီပေးသူတွေက ရှာရပါတယ်။ အဲဒီအကြောင်းဓာတ်ပုံတွေနဲ့ လတ်ဆတ်တဲ့အစီရင်ခံစာ တခုကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
APPPB Update (July 20): HR Situation in Armed Conflict Zone, Karen State by Free Burma Rangers
Please find the following excerpts from the report by Free Burma Rangers (FBR). The report dated July 13, 2007 gives us an update on some of the Burma Army’s atrocities documented by FBR in Papun, Dooplaya and Nyaunglebin Districts of Karen State in May and June 2007.
FBR reports that Burma Army continues to terrorize and oppress villagers in Karen State in its attempt to completely dominate or drive out the civilian population. Frequent attacks have been launched in the last few months in which villagers are shot on site and homes ransacked and belongings destroyed. These attacks are intended to intimidate people and make life impossible, forcing villagers into refugee camps or forced relocation sites. For more information: www.freeburmarangers.org
1) PAPUN DISTRICT:
May: Two women from Takehder village in Luthaw Township, aged 22 and 18, were raped, had their breasts and ears cut, and were then killed. They were gathering vegetables in the jungle when captured by the Burma Army troops.
17 May: The Burma Army troops shot and killed Naw Ku Lue, 19 in her farm house, during an attack on Klaw Kloe Lo village and her body was burned with the house. In this same attack,7other houses and 20 tins of rice were also burned.
2) DOOPLAYA DISTRICT:
23 June: Burma Army and its allied DKBA (Democratic Karen Buddhist Army) troops capturedanumber of people from Htee K’Bler village in Dooplaya District and killed an entire family including two children, ages4and 13 andagrandmother, age 65. The names of the victims are:
3) NYAUNGLEBIN DISTRICT:
11 May: LIB 220 of LID (Light Infantry Division) 11 attacked the area of Htee Nya Mu Kee village and burned down one paddy store during the attack. Asaresult of this attackatotal of 107 villagers fled into hiding (31 from Htee Nya Mu village, 19 from Htee Thu Kee and 57 from Wa Per Kwee villages) with no time to collect any of their belongings or food stores.
13 May: About 30 soldiers from LID 88 shelled Yaw Ki village with about 40 mortars, and then sprayed it with small arms fire. Saw Ra Say, 20, was shot dead and4farm huts with all belongings including rice and paddies were also burned down. All of the villagers have fled Yaw Ki and are now in hiding in the jungle.
30 May: The Burma Army attacked the Ta Kwa Doh village area of Ker Doh village tract in Kyauk Kyi Township.
2 June: The Burma Army LIB (Light Infantry Battalion) 540 captured six villagers from the area of Ya Kaing Taung village and accused of having contact with the KNU (Karen National Union). They were immediately killed. LIB 540 then informed the Ya Kaing Taung villagers that they must move their village to Tha Pyi Nyut.
4) FORCED LABOR
7 May: The Burma Army forced 154 villagers from Myaung Oo, Aung Chan That and Paw Pi Der villages in Mon Township to work onanew road between Toe Daw and Yin O Sein. This new road cuts through villagers' farmland and has destroyed over 500 acres. The road will connect the headquarters of LIB 599 at Toe Daw and LIB 590 at Yin O Sein. Another5villagers from Yulo and one from K’mulo were also conscripted for buildinganew camp between Yulo and Play Hsa Lo, at Lepelo.
posted by မြင့်ဇေ @ 3:32 AM0comments
posted by မြင့်ဇေ @ 11:49 PM0comments
posted by မြင့်ဇေ @ 7:08 AM0comments
ဆရာကြီး သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်းကွယ်လွန်ခြင်း ၄၃နှစ်မြောက် ဓာတ်ပုံ
စမ်းချောင်းမြို့နယ် ချမ်းသာလမ်း ဆရာကြီး နေအိမ်၌ ဆရကြီး သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်း ကွယ်လွန်ခြင်း ၄၃ နှစ်မြောက် အထိမ်းအမှတ်ကို ဆရာကြီး ဂူဗိမာန် စောင့်ရှောက်ရေး ကော်မတီနှင့် ဆရာကြီး၏ မိသားစုဝင်များ
posted by မြင့်ဇေ @ 10:37 PM 1 comments
သစ်စေ့လေးများအိပ်နေချိန်မှာ ပွင့်လန်းဖို့အတွက် ပြင်ဆင်ကြရအောင်
တနေ့ က… အလုပ်လည်း မလုပ်ချင်။ အိပ်ကလည်း အိပ်ချင်နဲ့။ ၂၀၀၇ ခုနှစ် ဧပြီလထုတ် စံပယ်ဖြူ စာအုပ်လေးကို အသာလေးယူပြီး အခန်းထဲဝင်ပြီး ဖတ်လိုက်တာ.. အိပ်ချင်စိတ်လည်း ပျောက်သွားတယ်၊ မအိပ်အောင်လည်း ထိန်းထားလိုက်ရတယ်။ ဖတ်မိတဲ့ ဆောင်းပါးလေးက လွတ်လပ်အိမ်ရေးထားတဲ့ `သစ်စေ့များအိပ်နေချိန်နှင့် ပညာရေးတစေ့တစောင်း´ ဆိုတာပါ။
ဆောင်းပါးစအဖွင့်မှာ တရုတ်ပြည်က သတင်းတပုဒ်နဲ့စပါတယ်။ ဆောင်းပါးရှင်ကို သူ့မိတ်ဆွေတဦးက ပြောတာတဲ့။ ဘာသတင်းလဲဆိုတော့ တရုတ်ပြည်အလယ်ပိုင်းမှာ ရှေးဟောင်း အုတ်ဂူတခုကို ဖွင့်တော့ နှစ်ပေါင်းတထောင် သက်တမ်းရှိတဲ ပဒုမ္မာကြာစေ့ လေးတခုကို တွေ့သတဲ့။ အဲဒီမှာ သစ်စေ့လေးကို မျိုးပွားနိုင်မပွားနိုင် စမ်းကြည့်တော့ ပွားနိုင်သေးတာကို တွေ့ရတယ် ဆိုပဲ။ အံ့သြဖွယ်ကောင်းတာက သစ်စေ့လေးရဲ့ အိပ်နေတဲ့ အချိန်ဟာ နှစ်တထောင်… ပုံမှန် မျိုးစေ့တွေဆိုရင် တနှစ်ကျော်တယ်ဆိုရင်ပဲ ပိန်ရှုံ့ ခြောက်သွေ့ပြီး မျိုးပြတ်သွားတဲ့ အမျိုးမဟုတ်လား။
အဲဒါလေးဖတ်ရင်းနဲ့ တွံတေးသိန်းတန်ရဲ့ သီချင်းတောင်မှ အမှတ်ရလိုက်သေးတယ်။ `ပဒုမ္မာကြာရယ် ၊ ကျုပ်ရည်းစားနဲ့ ညားအောင်စောင့်ဦးကွယ်´ ဆိုတဲ့ စာသားလိုပေါ့။ ဖြစ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ တရုတ်ပြည်ရဲ့ သမိုင်းကလည်း ဒဏ္ဏာရီ အများသားမဟုတ်လား၊ နဂါးနိုင်ဓားထဲက ဇာတ်လိုက်တွေ ကျိန်စာဆိုထားတဲ့ သစ်စေ့လေးလည်း ဖြစ်နိုင်တာကိုး။
ထားတော့။ ပညာရှင်များက သစ်စေ့လေးဂူထဲမှာ ရောက်နေတဲ့ကာလကို ခေါ်တာ သိုးဆောင်းလိုခေါ်ရင် (Dormant Period) ဆိုပဲ။ သစ်စေ့လေး အိပ်နေချိန် လို့ မြန်မာမှု ဆောင်းပါးရှင်က ဆိုတယ်။ အဲဒီလို ဘာလို မျိုးပွားနိုင်လဲဆိုရင် သူမျိုးပွားဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့ အနေအထားအားလုံးကို ဒီသစ်စေ့လေးက ရလို့ဆိုတာပါပဲ။ ခြောက်သွေ့မှု၊ မြေအနေအထား၊ အေးစက်မှု စသဖြင့် ပေါ့ဗျာ။ ကျနော်ကတော့ စိတ်ဝင်စားတာ ဒီသစ်စေ့လေးလိုပဲ အခြား ရှင်သန်ခွင့်မရဘဲ ခေါက်ရိုးကျိုးနေတဲ့ ပုံစံခွက်ထဲက အကြောင်းအရာတွေကိုပါ။
ဆောင်းပါးရှင်က ကမ္ဘောဒီးယားက ပိုပေါ့ခေတ်နဲ့ အခုကာလ မျိုးဆက်သစ်တွေရဲ့ ပညာရေးကိုလေ့လာမှုကို နှိုင်းယှဉ်ပြ ထားပါတယ်။ ပိုပေါ့လက်ထက်က သုညခေတ်ကို ပြန်သွားဘို့ ကြံစည်တယ်။ ဆိုလိုတာက ပညာတတ်နေသူတွေဟာ အရင်းရှင်ပညာရေးရဲ့ အစေခံတွေဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် ဒီပညာတတ်တွေထဲက အတွေးအခေါ်တွေကို ရှင်းဖို့ဆိုရင် သတ်ပစ်ရမယ်။ မျက်မှန်တတ်တာဟာ ပညာတတ်ခြင်းရဲ့ အဓိပ္ပါယ် ဖော်ကျူးချက်ဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် မျက်မှန် တတ်သူတွေကို ရှင်းပစ်ရမယ်။ စသဖြင့် ပေါ့… ကိုယ်ယုံကြည်တဲ့ ၀ါဒရဲ့ တရားကိုယ်ကို မဆုတ်ကိုင်မိပဲ ကိုယ်လိုရာကို ကောက်ချက်ဆွဲပြီး ၀မ်းနည်းဖွယ်ရာ စက်ဆုပ်ဖွယ်ရာ လူသတ်ပွဲတွေကို ကျင်းပခဲ့ကြတယ်။ ပင်ကိုယ် မျက်စေ့မှုန်တဲ့ သူတောင်မှ မျက်မှန်မတပ်ရဲတော့ဘူး။ အဲဒီအဖြစ်အပျက်ကို သုညခေတ်လို့ ရည်ညွှန်းတာပါ။
ဒါပေမယ့် ဒီကာလမှာတော့ ဒီလို မဟုတ်တော့ပါဘူး။ကမ္ဘောဒီးယားရဲ တက်လာတဲ့ မျိုးဆက်သစ်တွေဟာ အန်ကောဝပ်ကြီးကို ပြန်ပြင်တယ်။ ထိန်းသိမ်းတယ်။ သူတို့ရဲ့ ရိုးရာဂီတတွေကို လေ့လာထားတဲ့ အဖြူတွေဆီက ပြန်ယူတယ်။ စသဖြင့်ပေါ့…။
ဒါရဲ့အဓိပ္ပါယ်က ရင်ထဲမှာ ပွားခွင့်မရတဲ့ သစ်စေ့ကို ရေခံမြေခံကောင်းကောင်းနဲ့ ထိန်းသိမ်းထားပြီး လုပ်ခွင့်ရတဲ့ အနေအထားမှာ ပြန်ပြီးပွားများတဲ့သဘောပါ။
ကဲ… ကျနော်တို့ရော ဘယ်လိုလဲ… ။ ဒီလို ထူပိန်းမှောင်မိုက်နေတဲ့ ခေတ်ကြီး စနစ်ကြီးအောက်မှာ သစ်စေ့တွေ တချိန်မှာ ပွင့်လန်းခွင့်၊ မျိုးပွားခွင့်ရအောင်လုပ်ထားဖို့လိုနေပါပြီ။ သစ်စေ့တွေနဲ့ တူတဲ့ မျိုးဆက်သစ်တွေ မဆွံ့အသွားအောင်၊ ရှင်သန်ကြီးပြင်းခွင့်ရအောင် သူတို့အိပ်နေရတဲ့ ကာလလေးမှာ ထာဝရ အိပ်မပျော်သွားဖို့အတွက် ရှင်သန်နိုင်မယ့် အနေအထား၊ အခြေအနေ၊ ရေခံမြေခံ လေးတွေ ဖန်တီးပေးကြပါစို့။ ဒါမှလည်း ကျနော်တို့ချစ်တဲ့ တိုင်းပြည်၊ လူမျိုး၊ ထုံးတမ်းဓလေ့အစဉ်အလာတွေ … ကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်မှာပါ။ သုညခေတ်ကို ပြန်မရောက်နိုင်မှာပါ။
ဒီစာလေးရဲ့ အထက်မှာ ပြောခဲ့တဲ့ အတိုင်းပဲ ကျနော်စာဖတ်ပြီးတော့ မအိပ်နိုင်တော့ပါဘူး။ အိပ်ပျော်သွားရင် ထာဝရ ဖြစ်သွားမှာဆိုးပါတယ်။ ဘာလို့ဆိုတော့ အိပ်ပျော်နေခဲ့ရတဲ့ ဘိုးတော် သစ်စေ့ကြီးတွေက ကျနော်တို့ကိုယ်တိုင် ဖြစ်နေခဲ့တာကိုး။ ကိုယ်မြင်ခဲ့တဲ့၊ ကိုယ်ထိတွေ့ခဲ့တဲ့ ဘ၀အရကိုက နောင်လာမယ့် သစ်စေ့လေးတွေ အိပ်နေရင်တောင်မှ နောင်တချိန်မှာ ပြန်ရှင်သန်လာစေနိုင်မယ့် အနေအထားကို ဖန်တီးဖို့ အပ်နှင်းခဲ့ပါပြီ။ သူတို့အနာဂတ် ၀င်းပစေဖို့အတွက် ကျနော်တို့က ပုခုံးနဲ့ ထမ်းတင်ကြရမယ်ဆိုတဲ့ ဆန္ဒနဲ့ ရေးလိုက်ပါတယ်။
posted by မြင့်ဇေ @ 9:22 AM 1 comments
မောင်ဖိုးဇေလေးကရော ကိုယ်ကျင့်တရား စောင့်ထိန်းနိုင်ရဲ့လား… … မနိုင်ပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်…..
ကိုယ်ကျင့်တရားတဲ့…။ မခင်မင်းဇော်က တက်ဂ်လိုက်တာပါ။ ကျနော်ကတော့ ချောက်ထဲကိုသာ ခုန်ချလိုက်ချင်တော့တာပဲ။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဖော် မသူတော်ဖြစ်မယ့် ဗြဟ္မာမင်းခေါင်းကြီးကို ကျနော့်အလှည့် ကိုင်ထားဦးဆိုပြီး လွှဲပေးလိုက်တာ။ အဲဒီ ခေါင်းကြီးကလည်း ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်နေတော့ ကိုယ့်အကြောင်းကို အခြေခံပြီး ရေးရတော့မှာပေါ့… … ။ ကျနော်လည်း ကိုယ်ကျင့်တရားအရ မှားဖူးပါတယ်။ အဲ့သလို ရေးလို့ မောင်ဖိုးဇေတယောက်တော့ သူများသားပျိုသမီးပျိုတွေကို စော်ကားဖူးတယ်လို့ မထင်လိုက်ပါနဲ့။ မှားတာက ငယ်ငယ်က စွန်လွှတ်တဲ့ရာသီရောက်ရင် အမေ့ပိုက်ဆံအိတ်ထဲက အမေမသိအောင် ခိုးယူဖူးပါတယ်။ နောက်တော့ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်း မှားမှန်းသိ၊ မိဘတွေက ဝေဖန်တဲ့အခါကျတော့ အဲ့ဒီအကျင့် ပျောက်သွားပါတယ်။
ကိုယ်ကျင့်တရား… ။ မောင်ဖိုးဇေရာ မင်းတို့က ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် ကိုယ်ကျင့်တရားလေးဘာလေး လျှောက်ပြောနေတယ်။ မင်းတို့ကရော ဘယ်လောက်များဆောက်တည်ထိန်းသိမ်း ကျင့်ကြံနိုင်လို့လဲ.. လို့ ပြောလာရင် ဟုတ်ကဲ့လို့ပဲ ပြောရမှာပါ။ လူတွေဟာ အားလုံး ခြောက်ပစ်ကင်းသဲလဲစင်တော့ မဟုတ်ကြဘူး။ အနှီ မောင်ဖိုးဇေသည်လည်း လူတယောက်ဖြစ်တာ ကြောင့် လေးပြစ်ငါးပြစ်လောက်ပဲ ကင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပြဿနာက ခြောက်ပစ်ကင်းအောင်လုပ်ဖို့ထက်စာရင် ကိုယ်ရဲ့ ကျင့်ကြံဆောက်တည်မှုမှာ ဘယ်အရာဟာ မှားခဲ့တာလဲဆိုတာကို စရှာတွေဖို့.. တနည်းအားဖြင့် ကိုယ့်အမှားကိုယ်ပြန်သုံးသပ် တဲ့ အချက်က ပထဦးဆုံး လိုအပ်ပါတယ်။ အဲဒီအမှားဟာ ကိုယ်တဦးတည်းရဲ့ ဘ၀ကိုသက်ရောက်စေတာလား။ ဒါမှမဟုတ် ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင် ကိုယ့်နေထိုင်တဲ့ လူမှုအ၀န်းအ၀ိုင်းကို သက်ရောက်စေတာလား။ ဒါကလည်း ကိုယ်ဟာ လူမှုအသိုင်း အ၀ိုင်းအတွင်း ဘယ်လောက် သြဇာသက်ရောက်တဲ့ အနေအထားမှာရှိနေသလဲဆိုတာနဲ့ ချိတ်ဆက်ပါတယ်။
ကိုယ်ဟာ သာမန်လူတယောက် ဆိုရင် အနိမ့်ဆုံးတော့ ကိုယ့်မိသားစုရဲ့အတွင်းပိုင်းကိုတော့ သက်ရောက်ပါတယ်။ အဲ့လိုပဲ ရာထူးဌန္တရ အလိုက် အဆင့်ဆင့်မှာ ကိုယ်ကျင့်တရားအရ တစုံတခုသော ဖောက်ပြန်မှုကို လုပ်သွားမယ်ဆိုလည်း ကိုယ်တာဝန်ယူတဲ့အဆင့်တိုင်းမှာလည်း သွားသက်ရောက်ပါတယ်။ ကိုယ်ကျင့်တရားဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတာ သူများ သားမယားကို သွားစော်ကားမှလို့ သတ်မှတ်လို့ရတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဥပမာ အစိုးရဌာနတခုခုမှာ တာဝန်ရှိသူတယောက်က လာဘ်စားတာဟာလည်း ကိုယ်ကျင့်တရား ပျက်ယွင်းမှုပါပဲ။ သူ့ကို ဒီတာဝန်ပေးထားတာဟာ တိုင်းပြည်နဲ့ လူထုအတွက် လုပ်ဆောင်ပေးဖို့ကို တာဝန်ပေးခန့်အပ်ပါတယ်။ သူ့ရပ်တည်မှုအတွက် သင့်လျော်တဲ့ လစာပေးထားပါတယ်။ လုပ်ငန်းအတွက် လိုအပ်ချက်တွေ ဖြည့်တင်းပေးထားတယ်။ ဒါတွေကို အသုံးချပြီး လူထုကို ကူညီရမှာပါ၊ အစိုးရဗျူရိုကရေစီ ယန္တရားကို လည်ပတ်စေရမှာပါ။
အဲဒီဟာရဲ့ သက်ရောက်မှုက သူတာဝန်ယူရတဲ့ ဌာနမှာရှိတဲ့ ၀န်ထမ်းတွေပေါ်ကိုပါ။ သူကတောင် ဒီလို ကြိတ်သေးတာ ငါတို့လည်း ကြိတ်မဟဲ့ ဆိုပြီး သူ့အထွာနဲ့သူ လာဘ်ယူကြတော့တာပဲ။ အဲဒီတော့ ကြာလာတဲ့အခါ ဒီလာဘ်စားတဲ့ကိစ္စက ဌာနဆိုင်ရာမှာ အတည်မပြုရသေးတဲ့ မူကြီးတခုလိုဖြစ်လာတယ်။ အမှားတွေကို လုပ်လာကြရင်း အမှန်လို့ ထင်လာကြတဲ့ သဘောပါ။ ဒါကြောင့် အဲဒီလိုပြဿနာဟာ မကြီးခင်ကတည်း အရင်ရှင်းရတာပါ။ စီးပွားရေး ကျပ်တည်းလို့ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်နဲ့တော့ မရတော့ပါဘူး။ စီးပွားရေး ကျပ်တည်းတာက ကိုယ်တယောက်တည်း ကျပ်တည်းတာ မဟုတ်တဲ့ အတွက်ပါ။ ကိုယ့်ကို လာဘ်ပေးတဲ့လူတွေလည်း ကျပ်တည်း တာပဲ။ တပြည်လုံးလည်း ကျပ်တည်း တာပဲ။
ကိုယ်ကျင့်တရားထိန်းသိမ်းဖို့မှာ နှစ်ပိုင်းရှိပါတယ်။ တပိုင်းက ကိုယ်ကိုယ်တိုင် အမှားကို မြင်ပြီး ထပ်မမှား အောင် နေထိုင်ဖို့ပါ။ နောက်တချက်ကတော့ ဘေးကနေ လက်ခုပ်တီးမပေးဖို့လိုပါတယ်။ လူတယောက်ရဲ့ကောင်းကွက်ကိုပဲ ကြည့်ပြီး သူရဲ့မကောင်းတဲ့အချက်ကို ပြုပြင်လာနိုင်အောင် ဝေဖန်မပေးဖူးဆိုရင် ဒီ လူ့အ၀န်းအ၀ိုင်း၊ လူ့အဖွဲ့အစည်းဟာ တော်တော်ကြီး ကို စိတ်ဓာတ်ရေးရာအရ နိမ့်ကျနေပြီးဆိုတာကို ပြနေပါပြီ။ ကိုယ်ချစ်ရတဲ့၊ ခင်ရတဲ့ လေးစားရတဲ့သူဆိုရင် မကောင်းပြောတာ မကြိုက်ကြဘူးဆိုတာက လူ့သဘာဝပါ။ ဒါပေမယ့် အဲဒီလို မကောင်းပြောတာကို အဲဒီလူမခံရအောင် အဲဒီသူကို ပြုပြင် လာစေရေး အကြံပေးသင့်ပါတယ်။
နောက်တခုက အဲဒီလို ကိုယ်ကျင့်တရား ဖောက်ပြန်နေမှုကို ပြုပြင်ဖို့ မတိုက်တွန်းတဲ့ လူ့အ၀န်းအ၀ိုင်းဟာ သူတို့ကိုယ်တိုင် လည်း အဲဒီလို ဖြစ်လိုက်ဖို့ ၀န်မလေးတော့ပါဘူး။
ဆရာ လူထု ဦးစိန်ဝင်းရဲ့ `ရှက်စိတ်´ ဆောင်းပါးထဲမှာ ပါတဲ့ `ရှက်စိတ်ဆိုတာ ခေတ်တွေ ပြောင်းလာတာနဲ့အမျှ ဖွင့်ဆိုချက် တွေလည်း ပြောင်းသွားကြပြီဖြစ်ပါတယ်´ ဆိုတာလေးကို ပြန်ကုတ်လုပ်ပါတယ်။ ခေတ်မှီရေး၊ ခေတ်နှင့် အညီသွားနိုင်ရေးဟာ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်စောင့်ထိန်းရမယ့်တရားတွေကိုလည်း အဲဒီခေတ်ထဲကို သယ်သွားရမှာပါ။ အဲဒီလို တဦးတယောက်ချင်းကနေပြီး မသယ်ဆောင်၊ မစောင့်ထိန်းရင် လူ့အဖွဲ့အစည်းဟာ ခေတ်မီရုံသက်သက်ဘဲရှိပြီး ဟီရိသြတ္တပ္ပတရားကင်းမဲ့တဲ့၊ သူများသားပျိုသမီးပျိုကို ကြံစည်ခွင့်ရှိတဲ့၊ အများသူငှာရဲ့ ချွေးနည်းစာကို လာဘ်ယူခွင့်ရှိတဲ့ အခြေအနေကို ရောက်ရှိသွားမှာပါ။
နောက်တခုက အမျိုးသားနိုင်ငံတော်ဆိုတာ ကိုယ်ပိုင်ထူးခြားမှု၊ ကိုယ်ပိုင်ယဉ်ကျေးမှု၊ မိသားစု စံတန်ဖိုးတွေနဲ့ ဖွဲ့တည်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခြားသောနိုင်ငံများနဲ့ မတူတဲ့ အဲ့ဒီထူးခြားချက်တွေကို ဘယ်ခေတ်ဘယ်အခြေအနေရောက်ရောက် ထိန်းသ်ိမ်းထားဖို့လိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ခေတ်နဲ့ လျော်ညီအောင်တော့ တချို့အရာတွေ ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်ပေးရမှာပါ။ ဒါပေမယ့် အခြေခံတရားကိုတော့ ဆုတ်ကိုင်ထားဖို့ လိုပါတယ်။ ကိုယ်ကျင့်တရားကောင်းအောင်နေရင်ပဲကို အဲဒီ လူမျိုး၊ နိုင်ငံဟာ စိတ်ဓာတ်ရေးရာအရ မြင့်နေပါပြီ။
အောင်မြင်တဲ့ လူတွေကတော့ အောင်မြင်လေ ပိုပြီးစောင့်ထိန်းရလေပါ။ ဘာလို့ဆိုတော့ သူတို့ဟာ လူထုက အမြဲ စောင့်ကြည့်နေတာကို ခံနေရလို့ပါ။ တနည်းအားဖြင့် လူထုက သူတို့ကို ချစ်လို့ ၊ တန်ဖိုးထားလို့ပါ။ သူတို့ရဲ့ သက်ရောက်မှု က သက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်အလိုက် အရမ်းကြီးတော့ နေမှုထိုင်မှုကအစ အရမ်းဂရုစိုက်ရပါတယ်။ သူတို့ကို စံပြုထားတဲ့ လူဆိုရင် ပိုဆိုးပါတယ်။ သူတို့လုပ်သမျှကို အမှန်ထင်နေတော့ အဲဒီလူတွေကလည်း ကိုယ်မှားနေတာကို ပြင်ဖို့နေနေသာသာ ဒီလိုလုပ်တာ မှန်တယ်လိုတောင် ထင်လာကြပါတယ်။
ဒါကြောင့် အမှားကို မှားတယ်လို့ မြင်အောင် လုပ်ဖို့က ကိုယ်ကျင့်တရားထိန်းသိမ်းရေးရဲ့ ပထမအခြေခံလို့ ကျနော်မြင်တယ်။ လူပဲမှားတတ်တာပဲလေ ဆိုတဲ့ သံဝေဂလိုလို၊ လက်ကိုင်ထားရမယ့် တရားလိုလို ဘေးကနေ မပြောဖို့လဲ လိုပါတယ်။ အမှားကို အဲဒီလူကိုယ်တိုင်က မမြင်လည်း အကြံပေးရပါမယ်။
ဒုတိယအဆင့်ကတော မြင်ခဲ့တဲ့ အဲ့ဒီအမှားက ပြန်ပြင်ဖို့လုပ်ရမှာပါ။ ခေတ်ကြီးကိုက မှားနေတာပဲလို့လည်း မပြောဖို့ လိုပါတယ်။ မှားနေတာကိုသိရင် မှန်အောင်ပြန်ပြင်ဖို့ လူ့အဖွဲ့အစည်းတခုလုံးရော၊ တဦးချင်းစီအရပါ တာဝန်ရှိပါတယ်။
ကျနော်တို့က လက်ခုတ်တီးဖို့ သက်သက်လူလာဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ ပွင့်လင်းတဲ့ စိတ်ဓာတ်မြင့်မားတဲ့ လူ့ဘောင် တည် ဆောက်ဖို့အတွက်လည်း ကျနော်တို့လက်တွေမှာ တာဝန်ရှိပါတယ်။
posted by မြင့်ဇေ @ 3:04 AM 1 comments
ဦးဝင်းတင်ဟာ အင်မတန် စာရေးကောင်းလှတဲ့ ကလောင်ရှင်တဦးဖြစ်သလို။ ထက်မြက်တဲ့ သတင်းစာ ဆရာတဦးလည်း ဖြစ်ပါတယ်၊ ဦးဝင်းတင်ကို ၁၉၃၀ ခုနှစ်။ မတ်လ ၁၂ ရက်နေ့မှာ အဖ ဦးပု။ အမိ ဒေါ်အမာတို့မှ ဖွားမြင်ခဲ့ပါတယ်၊ မွေးရပ်ဇာတိမှာ ပဲခူးတိုင်း ကြို့ပင်ကောက်မြို့ ဖြစ်ပါတယ်၊ ၁၉၅၃ ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှ အင်္ဂလိပ်စာပေ။ ခေတ်သစ်ရာဇ၀င်နှင့် နိုင်ငံရေးသိပ္ပံဘာသာတွဲဖြင့် ၀ိဇ္ဇာာဘွဲ့ရပါတယ်၊
၁၉၄၃ ခုနှစ်တွင် ‘အကျိုးဆောင်’ ဂျာနယ်တွင် ၀င်ရောက်လုပ်ကိုင်ခဲ့၍၁၉၅၃ ခုနှစ်တွင် AFP နိုင်ငံခြား သတင်းဌာနတွင် ညအယ်ဒီတာအဖြစ် ၀င်ရောက်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါတယ်၊ စာပေဗိမာန့် လက်ထောက်အယ်ဒီတာအဖြစ် ၁၉၅၀ မှ ၁၉၅၄ အထိ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်၊
၁၉၅၄ မှ ၁၉၅၇ ခုနှစ်အထိ နယ်သာလန် (ဟော်လန်) နိုင်ငံ။ အမ်စတာဒမ်မြို့ ဂျမ်ဘာတန် (Jambarton) စာအုပ်ထုတ်ဝေရေးကုမ္ပဏီတွင် စာအုပ်ထုတ်ဝေမှုပညာနှင့် စာနယ်ဇင်းပညာ ဆည်းပူးရင်း တဘက်မှလည်း မြန်မာ ဘာသာပြန် စာအုပ်စာတမ်းများ ထုတ်ဝေရေးတွင် အကြံပေးအယ်ဒီတာအဖြစ် လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါတယ်၊ တဘက်တွင် စာသင်နေရင်း မြန်မာနိုင်ငံ သတင်းများ စုစည်းဖော်ပြတဲ့ ‘ဒို့ပြည်သတင်း’ သတင်းစာကို စောင်ရေ ၅၀၀ ခန့် ထုတ် ဝေ၍ ကမ္ဘာတ၀ှမ်းရှိ ပြည်ပရောက် မြန်မာများထံ စာတိုက်မှ အခမဲ့ပေးပို့ဖြန့်ဝေခြင်းကို ၁၉၅၇ ခုနှစ် ဧပြီလ မြန်မာနိုင်ငံ ပြန်လာသည့်အချိန်အထိ လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်၊
၁၉၅၇ ခုနှစ် ကြေးမုံသတင်းစာ စတင်ထူထောင်သူများတွင် ပါဝင်ခဲ့ပြီး။ ဦးစီးအယ်ဒီတာအဖြစ် ၀င်ရောက် လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါတယ်၊ ကြေးမုံသတင်းစာ ချိတ်ပိတ်ခံရတဲ့နောက်ပိုင်း ၁၉၆၉ မှ ၁၉၇၈ ခုနှစ်အထိ ဟံသာဝတီသတင်းစာ၏ အယ်ဒီတာချုပ် ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်၊ ထိုကာလအတွင်း အနောက်ဥရောပနှင့် အရှေ့အာရှနိုင်ငံပေါင်း ၂၀ ခန့်သို့ သတင်းစာ ဆရာတယောက်အဖြစ် လေ့လာရေးခရီး သွားရောက်ခဲ့ပါတယ်၊
ဟံသာဝတီသတင်းစာကို မန္တလေးမြို့မှာ အခြေစိုက်ထုတ်ဝေခဲ့ပြီး ဦးဝင်းတင်ရဲ့ ‘၀င်းတင်’ ဆိုတဲ့ ကလောင် အမည်ဟာ ထင်ရှားလာပါတယ်၊ ‘ဦးဝင်းတင် (ဟံသာဝတီ)’ ဆိုတဲ့ အမည်နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကျော်ကြားခဲ့ပါတယ်၊
စာပေလွတ်လပ်ခွင့် မရှိတဲ့ မဆလ စစ်အစိုးရလက်အောက်မှာ ထုတ်ဝေခဲ့ရတဲ့ သတင်းစာဖြစ်ပေမယ့် ဟံသာဝတီ သတင်းစာဟာ ထက်မြက်လှတဲ့ သတင်းစာဆရာ ဦးဝင်းတင်ရဲ့ လိမ်မာပါးနပ်မှုကြောင့် အဲဒီခေတ်က ထုတ်ဝေတဲ့ သတင်းစာတွေကြားမှာ ထူးခြားစွာ ထင်ရှားပေါ်လွင်ခဲ့ပါတယ်၊ ဟံသာဝတီသတင်းစာရဲ့ အယ်ဒီတာ့ အာဘော်တွေဟာ သတင်းစာဖတ်ပရိသတ်အတွက် တမူထူးခြားခဲ့ပါတယ်၊
ဦးဝင်းတင်ဟာ မန္တလေးမှာ နေထိုင်နေစဉ် သမိုင်း။ ယဉ်ကျေးမှု။ စာပေအနုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ လှုပ်ရှားမှု တွေမှာ တက်တက်ကြွကြွ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်၊ မန္တလေး ‘ဓမ္မဗိမာန်’ စာတမ်းဖတ်ပွဲ။ ဟောပြောဖလှယ်ပွဲတွေ မှာလည်း ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်၊ ၁၉၇၇-၇၈ ခုနှစ်ထဲမှာ ‘စနေစာဖတ်ဝိုင်း’ ကို ဦးဆောင်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်၊ ဟံသာဝတီ ‘စနေစာဖတ်ဝိုင်း’ ဟာ မြန်မာနိုင်ငံ စာပေအနုပညာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အရေးပါတဲ့ လှုပ်ရှားမှု တခု ဖြစ်ပါတယ်၊
မြန်မာစာပေလှုပ်ရှားမှု့ အရေးပါသော မန္တလေးမြို့မှ ‘စနေစာဖတ်ဝိုင်း’ စာတမ်းဖတ်ပွဲတွေ ဟံသာဝတီ သတင်းစာရဲ့ ထူးခြားတဲ့ ပြောင်မြောက်မှုများကြောင့် မဆလ စစ်အစိုးရဟာ ဟံသာဝတီသတင်းစာကို ၁၉၇၈ ခုနှစ် မှာ လုံးဝပိတ်ပစ်လိုက်ပါတယ်၊ ဦးဝင်းတင်ကိုလည်း ရာထူးမှ ထုတ်ပယ်ခဲ့ပါတယ်၊
ဦးဝင်းတင်ဟာ စာပေ။ ဂီတ။ သဘင်။ ပန်းချီ စတဲ့ အနုပညာရပ်များမှာလည်း ထဲထဲဝင်ဝင်။ နှံ့နှံ့စပ်စပ် နားလည် ခံစားနိုင်သူတဦးဖြစ်ပြီး။ လေးလေးနက်နက် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနိုင်ကာ နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း ခံစားဖွင့်ဆို။ သုံးသပ် တင်ပြတတ်သူတဦး ဖြစ်ပါတယ်၊
ဦးဝင်းတင်ဟာ ‘ပေါ်သစ်’ ဆိုတဲ့ ကလောင်အမည်နဲ့ စာပေ။ ဂီတ။ သဘင်။ ပန်းချီ စတဲ့ အနုသုခုမ ပညာရပ် တွေအကြောင်း ဆောင်းပါးတွေ။ စာတမ်းတွေ။ ဝေဖန်ရေးအကဲဖြတ်ချက်တွေကို အဆင့်အတန်းမြင့်မြင့် ရေးသားပြစုခဲ့ ပါတယ်၊ “ခြေမှာကကွက် လက်ဖျားကဗျာ မျက်နှာဇာတ်သိမ်း” ဆိုတဲ့ စာအုပ်ဟာ ပေါ်သစ်အမည်နဲ့ ထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ ဦးဝင်းတင်ရဲ့ လက်ရာဖြစ်ပါတယ်၊
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရှားပါးလှတဲ့ ပန်းချီဝေဖန်ရေးဆောင်းပါးတွေကို ‘ပေါ်သစ်’ အမည်နဲ့ မဂ္ဂဇင်းတွေမှာ ရေးသားတင်ပြခဲ့ပါတယ်၊ အဲဒီဝေဖန်ရေးဆောင်းပါးတွေမှာ အတတ်ပညာ နည်းစနစ်ပိုင်းဆိုင်ရာရှုဒေါင့် အရောင် အတွဲအစပ် အလင်းအမှောင် စုတ်ချက် အထူအပါး အနုအရင့်ကနေ ခံစားမှုရသအာရုံရှုဒေါင့်ကရော အတွေးအခေါ် အမြင် အယူအဆ ဦးတည်ချက်ရှုဒေါင့်ပါမကျန် အနုစိတ် သုံးသပ်ကာ ရေးသားခဲ့ပါတယ်၊
အင်္ဂလိပ်စာကို ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် တတ်မြောက်သူဖြစ်တဲ့အလျောက် စာအုပ်ကောင်းတွေ ကို ဘာသာပြန်ဆိုခဲ့တဲ့ ဘာသာပြန် စာရေးဆရာတဦးလည်း ဖြစ်ပါတယ်၊ ခက်ခဲတဲ့ အရေးအသားတွေ။ စကားလုံး ဝေါဟာရ အဓိပ္ပါယ် နက်ရှိုင်းမှုတွေကြောင့် ဂျာနယ်ကျော် ဦးချစ်မောင်လို ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေကတောင် ဘာသာပြန်ဆို ပေမယ့် လက်တွန့်ခဲ့ရ တဲ့ သတင်းစာသမား အယ်ဒီတာတဦးအကြောင်း ရေးဖွဲ့ထားတဲ့ ‘ကွိ’ လို ၀တ္ထုကြီးကို ဘာသာပြန်ဆိုပေးခဲ့ပါတယ်၊ Northern Lightကို ဘာသာပြန်ဆိုတဲ့ ‘ဥတ္တရအလင်း’ ဟာလည်း ဦးဝင်းတင်ရဲ့ ဘာသာပြန် လက်ရာကောင်းစာအုပ်အဖြစ် မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကျော်ကြားခဲ့ပါတယ်၊
ဦးဝင်းတင်ဟာ ပြည်ပနိုင်ငံတွေသို့ ခရီးသွားလာခဲ့ဖူးပြီး ခရီးသွားမှတ်တမ်းစာပေတွေကိုလည်း ရေးသားခဲ့ပါ တယ်၊ ‘ကမ္ဘာနီတွင် တဒင်္ဂ’ ဟာ သူ့ရဲ့ ဆိုဗီယက်နိုင်ငံခရီးစဉ်အတွင်း သူ တွေ့ကြုံခံစားခဲ့ရသည်များကို ရေးသား ထားတဲ့ လက်ရာကောင်းတအုပ် ဖြစ်ပါတယ်၊
ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံကြီး ပေါ်ထွန်းလာတဲ့အခါ ၁၉၈၈ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၁၇ ရက်နေ့ စာပေအနု ပညာရှင်တွေရဲ့ လက်မှတ်ပေါင်းစုံနဲ့ စာပေအနုပညာရှင်တွေရဲ့ ကြေညာချက်ထွက်ပေါ်လာရေးအတွက် ဦးစီးဆောင် ရွက်ခဲ့သူတဦးဖြစ်ပြီး။ အရေးတော်ပုံကြီးအတွက် မနားမနေ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့သူတဦး ဖြစ်ပါတယ်၊ အရေးတော်ပုံ ကြီးအတွင်း စာနယ်ဇင်းသမဂ္ဂဖွဲ့စည်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါ ဆရာဦးဝင်းတင်ဟာ ဒုဥက္ကဌ ဖြစ်ပါတယ်၊ ‘စပယ်ဦး’ စာပေတိုက်အတွင်းမှာ စခန်းချပြီး စာနယ်ဇင်းသမဂ္ဂရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကို ဦးစီးပဲ့ကိုင်ပေးခဲ့ပါတယ်၊
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားသမဂ္ဂရဲ့ ‘သမဂ္ဂ’ သတင်းစာ ၈ စောင်မှာလည်း ပါဝင်ရေးသားပေးခဲ့ပါ တယ်၊ ၁၉၈၈ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၃၁ နေ့မှာ စတင်ပြီး အရေးတော်ပုံကြီးရဲ့ ပဲ့တင်သံ ‘ဆန္ဒဖော်သံ’ သတင်းစာကို ဆရာဦးဝင်းတင် ကိုယ်တိုင် ဦးစီးထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်၊ ပြည်သူလူထုအတွင်း သတင်းအချက်အလက်မှန်များ ရောက်ရှိအောင် စစ်မှန်သော သတင်းစာသမား ကောင်း ပီသစွာ ကြိုးပမ်းအားထုတ်ဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့ပါတယ်၊
၁၉၈၈ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၁၈ ရက်နေ့မှာ အရေးတော်ပုံကြီးကို အကြမ်းဖက် နှိပ်ကွပ်ဖြိုခွင်းကာ စစ်တပ် က အာဏာသိမ်းပြီးနောက် သမိုင်းရေးလိုအပ်ချက်အရ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဖွဲ့စည်းထွက်ပေါ်လာတဲ့အခါ ဆရာဦးဝင်းတင်ဟာ အဖွဲ့ချုပ် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီရဲ့ အတွင်းရေးမှူးအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်၊ ဦးအောင်ကြီး။ ဦးတင်ဦး။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ ၃ ဦး ပူးပေါင်းဦးစီးပြီး တဘက်လျှင် ၄ ဦးကျစီ။ ပေါင်း ၁၂ ဦးနဲ့ ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ကော်မတီမှာ ပါဝင်တာဝန်ယူခဲ့ပါတယ်၊
အဖွဲ့ချုပ် ပေါ်ပေါက်လာပြီး ကာလတိုတခုအတွင်းမှာပဲ အရှိန်အဟုန်ရလာတဲ့အခါ အဲဒီတုန်းက ဥက္ကဌ ဖြစ် ခဲ့တဲ့ ဦးအောင်ကြီးဟာ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှာ ကွန်မြူနစ်တွေ ရှိနေပါတယ်ဆိုတဲ့ စွပ်စွဲချက်နဲ့ ဦးဝင်းတင် အပါအ၀င် အဓိက ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင် ၈ ဦးကို ဖယ်ရှားဖို့ ကြိုးစားလုပ်ဆောင်လာပါတယ်၊ အဲဒီအခါ ဦးဝင်းတင် ဟာ မှန်မှန်ကန်ကန် ရပ်တည်ဖြေရှင်းရင်း မဲခွဲဆုံးဖြတ်ရေးအဆင့်အထိ ရောက်ရှိလာစေခဲ့ပါတယ်၊ ဗဟိုအလုပ်အမှု ဆောင် ကော်မတီနဲ့ ဗဟိုဦးစီးအဖွဲ့ဝင်အားလုံးရဲ့ ရှေ့ မှောက်မှာ အားလုံးရဲ့ ဆန္ဒမဲကို ရယူတဲ့အခါ ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပြီး သဘောတူညီချက်အရ ဦးအောင်ကြီး သာ နှုတ်ထွက်သွားခဲ့ရပါတယ်၊ ဦးဝင်းတင်ဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ဦးတင်ဦးတို့နဲ့အတူ အဖွဲ့ချုပ်အတွင်းမှာ ဆက်လက်ရပ်တည်ရင်း ဒီမိုကရေစီအောင်ပွဲခံနိုင်ရေး ရည်မှန်းချက်အတွက် ရှေ့တန်းက ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်၊
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဟာ တရားဝင် နိုင်ငံရေးပါတီတွေအတွင်းမှာ အင်အားအကောင်းဆုံး ဖြစ်လာခဲ့ပြီး အဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေကို မှတ်တမ်းတင်ဖော်ကျူးတဲ့ ‘သတင်းမှတ်တမ်းလွှာ’ ကို ထုတ်ဝေတဲ့အခါ ဦးဝင်းတင် ရဲ့ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတွေ ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်၊ နိုင်ငံရေးပါတီအသီးသီးက သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ နိုင်ငံရေး သဘောထား၊ အမြင်၊ တင်ပြတောင်းဆိုချက်ဆိုင်ရာ စာအုပ်စာတမ်းတွေ ထုတ်ဝေလာကြတဲ့အခါ န၀တ စစ်အစိုးရ ဟာ နိုင်ငံရေးပါတီ တွေရဲ့ တရားဝင်အခွင့်အရေးဖြစ်တဲ့ လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ရေးသားစည်းရုံးခွင့်ကို ပိတ်ပင်ချုပ်ချယ်ဖို့ မတရားသဖြင့် ကြိုးပမ်းလုပ်ဆောင်လာပါတယ်၊
၁၉၈၉ ခုနှစ် ဇွန်လ ၆ ရက်နေ့မှာ ပြည်ထဲရေးနှင့် သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာန ၀န်ကြီးဗိုလ်ချုပ်ဘုန်းမြင့် လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး စာအုပ်စာတမ်းစာစောင်တွေ ရိုက်နှိပ်ထုတ်ဝေခွင့်ကို ကန့်သတ်တဲ့။ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခွင့်အတွက် ‘မှတ်ပုံတင်’ လျှောက်ခိုင်းတဲ့ ကြေညာချက်အမှတ် ၃၈ ကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်၊ ဒါဟာ တရားမဋတမှုမရှိတဲ့ အမိန့် ကြေညာချက်ဖြစ်တဲ့အတွက် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် အစည်းအဝေးထိုင်ခဲ့ကြပြီး တုံ့ပြန်ဖို့ စဉ်းစားခဲ့တယ်၊ အဲဒီအခါ ‘ဟင်နရီ ဒေးဗစ်သော်ရိုး Henry David Thoreau’ ရဲ့ စာပိုဒ်ကို ကိုးကားပြီး ဦးဝင်းတင်က “အများပြည်သူ သဘောမတူတဲ့ အမိန့်အာဏာဟူသမဋ တာဝန်အရ ဖီဆန်ကြ” ဆိုတဲ့ ကြွေးကြော်သံ ကို တင်ခဲ့တယ်၊ လက်ခံသဘောတူညီမှုရခဲ့ပြီး ဒီချုပ်ပါတီ ရန်ကုန်တိုင်းရုံးမှာ ကျင်းပတဲ့ မဟာမိတ်ပါတီ ၄၆ ပါတီနဲ့ တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းစည်းဝေးတဲ့ ၁၉၈၉ ခုနှစ် ဇွန်လ ၂၁ ရက်နေ့ အစည်းအဝေးမှာ ဖြန့်ဝေပေးတဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ စာတမ်းကစပြီး ဒီကြွေးကြော်သံကို ထည့်သွင်းဖော်ပြရင်း စတင်သုံးစွဲခဲ့ပါတယ်၊ Henry David Thoreau - 1. All men recognize the right of revolution; that is, the right to refuse allegiance to and to resist the government, when its tyranny or its inefficiency are great and unendurable
၁၉၈၉ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၄ ရက်နေ့တွင် ပြစ်မှုမှ ရှောင်တိမ်းနေသည့် တရားခံတဦး ၏ ဖခင်ထံ ၁၉၈၈ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလအတွင်းက တယ်လီဖုန်းဆက် စကားပြောဆိုမှု ဟု အကြောင်းပြချက်ဖြင့် ဖမ်းဆီးခံရပြီး။ စစ်အစိုးရမှ ဦးဝင်းတင် ကို ၃ ရက်ကြာ အစာ မကျွေး။ အိပ်စက်ခြင်း မပြုနိုင်အောင် လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်၊ ထိုနှစ် အောက်တိုဘာလတွင် အလုပ်ကြမ်းနှင့် ထောင်ဒဏ် ၃ နှစ် ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က အများပြည်သူ ဆူပူအုံကြွအောင် လုပ်ဆောင်ရာတွင် နောက်ကွယ်မှ ဿကိးကိုင်အားပေးခဲ့ သည်ဟု အကြောင်းပြချက်ဖြင့် လွတ်ရက်စေ့ ကာနီး ၁၉၉၂ ခုနှစ် ဇွန်လတွင် ထောင်ဒဏ် ၁၁ နှစ် ထပ်မံချမှတ်ခံရပါတယ်၊
ဦးဝင်းတင် ကို ၁၉၈၉ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၄ ရက်နေ့ ဖမ်းဆီးချိန်မှစ၍ အင်းစိန်ထောင် အထူးတိုက်ဝင်းအတွင်း မှာ ထားရှိ၍ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လုံးဝ အဆက်အသွယ် ဖြတ်တောက်ထားခဲ့ပါတယ်၊ ၁၉၉၁ ခုနှစ် နှစ်ကုန်ပိုင်းတွင် ဦးဝင်းတင် ကို အထူးတိုက်မှ အမှတ် ၃ တိုက်သို့ ပြောင်းရွှေ့ထားခဲ့ပါတယ်၊
မြန်မာနိုင်ငံသို့ ကုလသမဂ္ဂအထူးကိုယ်စားလှယ် ‘ယိုဇိုယိုကိုတာ’ လာရောက်စဉ်အတွင်း အကျဉ်းချခံနေရ သော နိုင်ငံရေးသမားများအပေါ် န၀တ အာဏာပိုင်တွေရဲ့ ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပလပ်စတစ်အိတ် (ကျွတ်ကျွတ် အိတ်) တွေပေါ်မှာ အသေးစိတ်ရေးသားပေးပို့တဲ့စာကို အခြားနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေနဲ့အတူ ပါဝင် လက်မှတ်ရေးထိုး ပေးပို့ခဲ့ပါတယ်၊
ဒါ့အပြင် အကျဉ်းထောင်အင်္ကျီတွေပေါ်မှာ “စု။ လွှတ်။ ပြန်တွေ့။ စု။ ဖျက်။ တွေ့” ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ မြန်မာ ပြည် နိုင်ငံရေးသုံးသပ်ချက်စာတမ်းကို ရေးသားပြုစုကာ အပြင်ကို ထုတ်ခဲ့ပါတယ်၊
“စု” ဆိုတာက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံး လွတ်မြောက်ရေး။
“လွှတ်” ဆိုတာက လွှတ်တော်ခေါ်ယူရေး။
“ပြန်တွေ့” ဆိုတာက အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးအတွက် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲများ ပြုလုပ်ရေး။
“စု” ဆိုတာက ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုသစ် ပေါ်ထွန်းရေး။
“ဖျက်” ဆိုတာက အမျိုးသားညီလာခံကို ဖျက်သိမ်းရေး။
“တွေ့” ဆိုတာက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် န၀တ (ယခု နအဖ) တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး။
ဆိုတဲ့ နိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်ကို ဦးဝင်းတင် ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်၊ ၁၉၉၃ ခုနှစ်ကတည်းက တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး လမ်း ကြောင်းကို နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအတွင်း အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီး လမ်းကြောင်းဖော်ခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်၊
အဲဒီစာတွေကို ၁၉၉၅ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလမှာ အကျဉ်းထောင်အတွင်းမှ ပြင်ပသို့ လျှိူ့ ဝှက်စွာ ထုတ်ပေးခဲ့ပါ တယ်၊ ထိုကိစ္စတွေကြောင့် ဦးဝင်းတင် ကို ၁၉၉၆ ခုနှစ် မတ်လ ၂၈ ရက်မှာ ထောင်ဒဏ် ၇ နှစ် ထပ်မံတိုးခဲ့ပါတယ်၊
၁၉၉၅-၉၆ ခုနှစ်အတွင်း ထောင်ချခံနေရစဉ် ထောင်တွင်းစာစောင်များ လျှို့ဝှက်ထုတ်ဝေခဲ့မှု။ စာမူတွေ ရေးသားပေးမှု။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အကျယ်ချုပ်က လွတ်မြောက်လာခြင်းကို ကြိုဆိုဝမ်းသာတဲ့ သဘောထား ထုတ်ဖော်ချက်တွေ ရေးသားပေးမှု အတွက် အကြောင်းပြပြီး ဆရာဦးဝင်းတင်ကို ပြစ်ဒဏ်တွေ ထပ်မံတိုးခဲ့ပါတယ်၊ ဒီလိုအဖြစ်မျိုးဟာ ဗမာပြည်သမိုင်းမှာ။ ထောင်သမိုင်းမှာ မရှိဘူးသေးတဲ့ အဖြစ်မျိုးပါ၊ ဆရာဦးဝင်းတင်အပေါ် န၀တ ရဲŒ အòငိး။ ရက်စက်ယုတ်မာမှု ဘယ်လောက်ကြီးမားတယ်ဆိုတာ ဗြောင်ကျကျ ဖော်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်၊
သို့သော်လည်း အမြဲတမ်းနိုးကြားပြီး မည်ကဲ့သို့မှ ပိတ်ဆို့ဟန့်တာှးုမရတဲ့ ဦးဝင်းတင်ဟာ ယနေ့ထိတိုင် အောင်ပင် မှန်ကန်တဲ့ နိုင်ငံရေးပေါ်လစီတွေကို ထောင်တွင်းမှနေ၍ ချမှတ်ပေးနိုင်သူ ဖြစ်ပါတယ်၊ ၂၀၀၄ ခုနှစ်အတွင်း မှာပဲ ‘(ထ) လေးလုံး’ ဆိုတဲ့ ပေါ်လစီကို ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်၊
ပထမ ‘ထ’ က ထူထောင်ရမယ်။
ဒုတိယ ‘ထ’ က ထိန်းသိမ်းရမယ်။
တတိယ ‘ထ’ က ထိုင်မနေနဲ့။
စတုတÎ ‘ထ’ က ထိတွေ့ရမယ်။
ဆိုပြီး ယနေ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲŒ အခြေအနေနဲ့ ကိုက်ညီစွာဖြင့် ထက်ထက်မြက်မြက် ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်၊
ဦးဝင်းတင်ဟာ အကျဉ်းကျနေစဉ်အတွင်းမှာ ၂၀၀၁ ခုနှစ်တွင် ယူနက်စကိုအဖွဲ့ကြီး. ယူနက်စကို။ ဂွီလာရ်မို ကာနို ကမ္ဘာ့စာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်ခွင့်ဆု (UNESCO/Guillermo Cano World Press Freedom Award) ချီးမြှင့်ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်၊ အဲဒီနှစ်မှာပဲ ကမြာ့သတင်းစာများအသင်းကြီး (World Association of Newspaper, Wan) မှ လွတ်လပ်မှုရွှေကလောင်ဆု (Golden Pen of Freedom Award)ကို သာယာဝတီစမ်းစမ်းနွဲ့နှင့် အတူ ရရှိခဲ့ပါတယ်၊ နယ်ခြားမဲ့သတင်းထောက်များအဖွဲ့နှင့် ပြင်သစ်ဖောင်ဒေးရှင်းကလည်း ဆုများ ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်၊
ဦးဝင်းတင်ဟာ ယခုအခါ ၇၇ နှစ်ပြည့်လို့ ၇၈ နှစ်ထဲကို ၀င်ရောက်နေပြီး ဖြစ်ပါတယ်၊ လက်ရှိ အင်းစိန် အကျဉ်းထောင်မှာ အကျဉ်းကျခံနေရဆဲ ဖြစ်ပါတယ်၊ အသက်အရွယ်ကြီးရင့်မှု။ ထောင်တွင်း အကျဉ်းကျခံကာလ ကြာမြင့်လာမှုတို့ကြောင့် ကျန်းမာရေးမှာ အဖက်ဖက်မှ ချွတ်ယွင်းလျက်ရှိပါတယ်၊ အထူးသဖြင့် လည်ပင်းကျီးပေါင်း တက်ရောဂါ။ အူကျရောဂါ။ သွေးတိုးရောဂါ။ ဆီးကျိတ်ရောင်ရောဂါ။ သွားကိုက်ရောဂါတို့ကို ခံစားနေရပါတယ်၊ သို့သော်လည်း စိတ်ဓာတ်ရေးရာ ကြံ့ခိုင်နေဆဲပါ၊
မကြာသေးခင် ရက်ပိုင်းအတွင်းက အကျဉ်းထောင်သို့ လာရောက်တွေ့ဆုံခွင့်ရတဲ့ မိတ်ဆွေတဦးကို ဦးဝင်းတင်ရဲ့ ပြောပြချက်အရ - သူ့ကို အကျဉ်းထောင်အရာရှိ နှစ်ဦးက ယခင် ရက်သတ္တပတ်အတွင်းမှာ သီးသန့် တွေ့ဆုံခဲ့ကြောင်း။ သူတို့က အကယ်၍ဦးဝင်းတင် ထောင်မှ လွတ်မြောက်မည်ဆိုပါက နိုင်ငံရေးဆက်လုပ်ရန် အစီအစဉ် ရှိ။ မရှိ မေးမြန်းခဲ့ကြောင်း။ ထိုအခါ သူက မိမိရဲ့ နိုင်ငံသားဝတ္တရားအရ ဒီမိုကရေစီရေးအတွက် ဆက်လက် ရုန်းကန်လှုပ်ရှားမည်မှာ သေချာကြောင်း ပြန်ပြောဆိုခဲ့သည်ဟု သိရပါတယ်၊ (မြန်မာသတင်းသမဂ္ဂ - ဘီအမ်အေ)
“လောကမှာ တော်သူတွေ မရှားသလို ကောင်းသူတွေလည်း မနည်းပါဘူး၊ အနမတဂ္ဂ အင်မတန်များပြား လှတယ်လို့ ဆိုလိုက ဆိုနိုင်ပါတယ်၊ လွန်လွန်ကျူးကျူး ပြောရာ မရောက်ပါဘူး၊ ဒါပေမယ်လို့ တော်လည်းတော်။ ကောင်းလည်းကောင်းတဲ့ လူမျိုးကတော့ ရှားမှရှားလို့ ဆိုနိုင်လောက်အောင် ရှားပါတယ်၊ ဒီလိုလူ တကျိပ်လောက်ထဲ မှာ ဆရာဦးဝင်းတင် ပါဝင်တယ်” (ဗိုလ်တထောင်သတင်းစာ လူထုဦးစိန်ဝင်း)
“ရဲရင့်ကြံ့ခိုင်တဲ့ ဦးဝင်းတင်လို ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကို လိမ်လည်ဝန်ခံခိုင်းလို့ ဘယ်တော့မှ ရမယ် မဟုတ်ပါဘူး” (မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်)
ဆရာကြီး ဦးဝင်းတင်၏ စကား
“နိုင်ငံရေးသမားကောင်းဆိုတာ နှစ်ရှည်သီးပင် စိုက်ရတဲ့ ဥယျဉ်မှူးစိတ်ဓာတ်မျိုး ရှိဖို့လိုတယ်၊ ‘ကိုယ် စားရမှ စိုက်မယ်’ ဆိုတဲ့ စိတ်မျိုးနဲ့တော့ နိုင်ငံရေးသမားကောင်း မဖြစ်နိုင်ဘူး”
နေ့စွဲ - ဇူလိုင်လ ၁၈ ရက်။ ၂၀၀၇ ခုနှစ်၊
posted by မြင့်ဇေ @ 10:31 PM0comments
ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ၏ အမျိုးသားညီလာခံနှင့်ပတ်သက်၍ ထုတ်ပြန်ချက်
posted by မြင့်ဇေ @ 9:47 PM0comments
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲဏ္ဍချုပ်မှာ ကျင်းပတဲ့ အခမ်းအနားဓာတ်ပုံများ
ပုံများကို ဆက်လက်ကြည့်ရှုလိုပါကအောက်ပါ လင့်ခ်ကို နှိပ်ပါ။
posted by မြင့်ဇေ @ 8:44 PM0comments
posted by မြင့်ဇေ @ 10:23 AM 1 comments
သြော် အဆောင်ဆောင် နန်းတွေ ကြဌန်းတွေနှင့်နှော
အောင်စာတန်း ချို့ စေဖို့၊ အောင်ပန်း ညှို့ရရှာတဲ့
တောင်တမန်း တို့ဗမာမှာ အဟောင်းသံသရာ အငုတ်တွေနှင့်
အောင်ဆန်းတို့ မသာမယာဟာ ၄င်းကံကြမ္မာ အလုပ်ပေထင့်
သောင်းမြန်းမရဏာ စမုတ်မှာတော့ ချုပ်သနဲ့ ယင်းအလိုတွင်
ဒေါင်းလံပုဝါ အုပ်ပါလို့ ကျုပ်ဖြင့် သင်္ဂြိုလ်ချင်။
ခက်ကပြီ လက်ဆည်လို့ မရနိုင်ဘု
ရန်အဖြစ်မကွဲ့ မနှေးသနော် တသောင်းဒီဇဗ္ဗူ ရမ်းနေကြ
ကျန်ရစ်ကဲ့ မြေးတော် အလောင်းစည်သူရဲ့ နန်းကိုဖြင့်
လူကြမ်းဒမြ ကြမ်းလာရမ်းလာတဲ့ အရေးတွင်မှ
ရွှေမြန်မာဘုံမှာ အမင်းမင်း သမ္မတတွေနဲ့
သတင်းလှတဲ့ အင်းဝ ရာဇာအမွန်သာလွန်မင်းကိုမှ
ဟိုအရင် ယမန် နန်းတော်စီးစဉ်က
အပျက်ကြီးပျက်ကာ အသက်ခန္ဓာတွေ ဆုံးပုံနဲ့
မင်းရဲ နန္တမိတ် ခများညီသနင်းပေပေ့ါ
မှုန်မှုန်ဆန်ဆန် ပုန်ကန်တဲ့ အတိုင်းရဲ့ပြင်
သမိန်ပရမ်း ဆိုသူ စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကိုဖြင့်
မဟုတ်တရုတ် အကောင်တေလေ တစေ ကိုက်တာနဲ့
ဆရာတမူ မကြာမကြာ လွမ်းရပါတဲ့
ငါတလူ ငါသရမ်းရော့ မဟဲ့လို့
သာခန်း ပလ္လင် ညွှန်းပြီး
ပမာသော် တူတယ်လို့ နှိုင်းမိတယ်
ရိုင်းသနဲ့ အတိတ် ယခင်လိုနော်ကွယ်
မင်းစိတ်မင်းမာန် အကြံအဖန် တင်းလိုက်ပုံက
အင်္ဂလိပ် ယင်းဂျပန် နှစ်တန်ရှင်းပါလို့
(အိုကွယ်) တကောင်း ရာဇ၀င်ကိုတဲ့ ဆက်ချင်သဘော။
ထိုထို လူ့ခ၀ဲကို မကြည်ညိုတဲ့
တနွေးနွေး မူးမူးပြီးခွေးဘီလူးလို အကောင်မိုက်တွေက
ဗြောင်ကိုက်သဟာမှာ ယာယီ ယတြာအချိန်နဲ့ ဇာတာမှိန်လို့မို့
ဂနာမငြိမ် တာဝတိံယွန်းကြပေ့ါ
ဖြေမကြည် နေရီတော့ လွမ်းစေဖို့
မြန်မာပြည်ပေါ်ကို ဓမ္မစည်တော် ရွမ်းချိန်မို့
အာဇာနည် ဗိမာန် ပုထိုးကိုဖြင့်
ပါရမီ အဓိဌာန် တမျိုးရယ်နှင့်
သြော် တောင်နန်းမြောက်နန်း အဆောင်ဆောင် ကြဌန်းနဲ့
အခေါင် မမြန်းရခင်က အောင်ပန်း ညို့ရရှာတဲ့
အောင်ဆန်းတို့ သေပုံနှမြော။ ။
posted by မြင့်ဇေ @ 2:06 AM0comments
ကိုယ့်ရွေးချယ်မှုနဲ့ ကိုယ် ပစ်တင်ခဲ့သူ
တရားကို ခင်တွယ်စိတ်ဟာ ပိုနက်ရှိုင်းလေ
ယိုင်နဲ့နဲ့ ကွပ်ပျစ်ကလေးအကြောင်းပဲ တွေးနေမိတယ်။
၁၆၊ ၆၊ ၂၀၀၅ တွင်ကွယ်လွန်သွားသော ရဲဘော်ထက်မိုးအတွက်
posted by မြင့်ဇေ @ 8:14 PM0comments
ကျနော် မတတ်တခေါက်နဲပ ဘာသာပြန်ထားတာပါ။ လားအိုစ့် ၀တ္ထထုလေးတပုဒ်ပါ။ အကြောင်းအရာကတော့ မိခင်တွေရဲံ စိတ်ကို ဖွဲတာပါ။ နည်းနည်းလေး ဝေဖန် ပေးကြပါဦး။ ၀တ္ထု ရေးသူနာမည်က Outhine Bounyavong ပါ၊ အခု ဘာသာပြန်တာက လာအိုစ့်ကနေ အ၈င်္လိပ်ဘာသာကိုပြန်ပြီး ထုတ်ဝေတဲ့ စာအုပ်ါ၊ ၁၉၉၉ ။ ၀ါရှင်တန် တက္ကသိုလ် ထုတ်ဝေရေးက ထုတ်ခဲ့တာပါ။ ဖတ်ဖူးသူများ ဝေဖန်ပေးစေချင်ပါတယ်။ ကျနော်ကတော့ ယဉ်ကျေးမှုတွေ နားလည်လာနိုင်ဖို့ တခုတည်းပါ။ ၀တ်ထု နာမည်က mother's beloved ပါ
နွားလှည်းတစီးသွားဖို့သာသာလောက်သာ ရှိတဲ့ လမ်းကလေးအတိုင်း ကျနော်တို့ လျှောက် လာခဲ့ကြတယ်။ တောအုပ်အတွင်း နှစ်နာရီလောက်ဖြတ်သန်းလျှောက်ပြီးတော့ ကျယ်ပြန့်ပြီး မြက်ပင်တွေဖုံးလွှမ်းနေတဲ့ စားကျက်မြေတခုကို ကျနော်တို့ ရောက်သွားတယ်။ ကျနော်တို့ ဖြတ်လာခဲ့တဲ့ လမ်းရဲ့ ညာဘက်တကြောမှာက ၀ါခင်းတွေ၊ နှမ်းခင်းတွေ၊ သခွားခင်းတွေနဲ အခြားရိတ်သိမ်းရမယ့်သီးနှံစိုက်ခင်းတွေ။ဟိုအဝေးလှမ်းကြည့်ရင် အခြားသစ်ပင်ငယ် တွေကို အရိပ်မိုးနေတဲ့ အုန်းပင်ရှည်ရှည်တွေ။ အိမ်ခေါင်မိုး နှစ်ခု သုံးခုကို သစ်ပင်အုပ်ကြား ကနေ လှမ်းတွေ့ရတယ်။ တခြား အိမ်ခေါင်မိုးတွေကတော့ သိပ်သည်းတဲ့သစ်ကိုင်း သစ်ခက်တွေရဲ့ အနောက်မှာ ကွယ်နေတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ ကျနော်တို့ရဲ့ ရည်မှန်းချက် ခရီးလမ်းဆုံးကို နီးကပ်လာခဲ့ပြီ။
ဒီခရီးမှာ ကျနော်နဲ့အတူ စာနယ်ဇင်းသမားနှစ်ယောက် ပါလာခဲ့တယ်။ သူတို့က ရွာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ စာမတတ်သူ ရာခိုင်နှုန်းကို အချက်အလက်စုဖို့ လိုက်လာတာပါ။ ကျနော်က ပညာသင်ကြားရေးမှာ အထောက်အကူအဖြစ် အသုံးချနိုင်မယ့် ကျေးလက်လူထုပါးစပ် ပုံပြင် တွေကို မှတ်တမ်းတင်ဖို့ပါ။
လမ်းဘေးအတိုင်း ကျနော်လျှောက်လာရင်း မမှားယွင်းနိုင်စိတ်ခံစားမှုတွေ၊ အမှတ်ရဖွယ်ရာ တွေ ပြန်နိုးထလာတယ်။ကျနော်ဟာ ကိုယ့်မွေးရပ်ဇာတိကို ဘယ်လို ခွဲခွာသွားခဲ့တယ်၊ ဘယ်လိုပြန်ရောက်လာခဲ့တယ်စတာတွေကို ကျနော် တွေးတောနေခဲ့တယ်။ ဖြတ်ခနဲ ပေါ်လာတဲ့ ဒီလို စိတ်လှုပ်ရှားစဖွယ် အမှတ်သညာပုံရိပ်တွေနဲ့ အတူ လျှောက်လာဆဲမှာပဲ လေထဲမှာလွင့်လာတဲ့ ခီအိုမြက် (လော အခေါ်အဝေါ်ပါ)ရဲ့ စူးရှတဲ့ရနံ့ကို ခံစားနေရတယ်။ တပင်နဲ့တပင် ပွတ်တိုက်မိနေတာကြောင့်ထင်တယ်။ ၀ါးပင်ရဲ့ အကိုင်း အခက်တွေဆီက ထွက်လာတဲ့ တဂျိဂျိ အသံ.. ။အဝေးဆီက ကြီးမားကြည်လင်တဲ့ သူတို့ရဲ့ အတောင်ပံတွေနဲ့ ရည်ရွယ်ရာမဲ့ အော်နေတဲ့ စီကာဒါ ပိုးကောင်တွေရဲ့ အသံတွေ။ ကျနော့်နားစည်ထဲမှာ လှပတဲ့ ဂီတသံတခုလို ပဲ့တင်ထပ်နေတယ်။ ကြားနေရတဲ့အသံတွေက ကျနော်ဇာတိချက်ကြွေနဲ့ တူညီလှတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် အနေအထားတခုကို ပဉ္စလက်ဆန်ဆန် ဖန်တီးနေပေမယ့် တကယ်တမ်းကတော့ ကျနော့်နဲအတူပါလာတဲ့ ခရီးသွားဖော်တဦးဖြစ်တဲ့ ဘွန်ခမ်း မွေးရပ်မြေကို ပြန်လာခဲ့ကြတာပါ။
သူ့ ဇာတိရွာကလေးကို ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းမြင်ရချိန်မှာတော့ စိတ်လှုပ်ရှားမှုအတိနဲ့ ဘွန်ခမ်းက ပြောပြတယ်။ `ကျနော် ဒီရွာကို ခွဲခဲ့တာ နှစ် နှစ်ဆယ်ရှိသွားခဲ့ပြီ။ ကျနော့်ရွာဆီ ရောက်မယ့် သယ်သွားမယ့်လမ်းကလေးကို မြင်လိုက်ရတော့ မောပန်းနွမ်းနယ်မှုတွေအားလုံး ပျောက်ကွယ်သွားသလိုပဲ။ ပန်းချီကားတချပ်ကို ဆွဲထားသလိုမျိုး ဖြစ်နေတယ်။´ ဘွန်ခမ်းရဲ့ အသံဟာ ပျော်ရွှင်ရယ်မောသံနဲ့ ပြည့်လျှမ်းနေတယ်။
ဒီနေရာမှာ သူမွေးဖွားခဲ့တဲ့ အကြောင်း။ပြီးတော့ ဒီနေရာမှာဘဲ သူအသက်ရှစ်နှစ်သားမှာ သူ့အမေ ဟာ ကွယ်လွန်သွားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်း။ သူ့ အဖေဟာ အခြားရွာက အမျိုးသမီး တယောက်နဲ့ နောက် အိမ်ထောင်ပြုခဲ့ပြီး စစ်ပွဲနဲ့ ရုန်းကန်ထကြွမှုတွေကြောင့် တိုင်းပြည် အစိတ်စိတ်အမွှာမွှာ ဖြစ်နေချိန် နှစ်ပေါင်းများစွာ အတောအတွင်း သူတို့မိသားစုဟာ တရွာပြီးတရွာ ပြောင်းရွှေ့ ပြီးနေထိုင်ခဲ့ရတဲ့ အကြောင်း ဘွန်ခမ်းက ကျနော်တို့ကို ပြန်ပြောပြတယ်။ အခုအချိန်တိုင်အောင် သူမွေးရပ်ကို ပြန်လာဖို့အတွက် တခါမှ အခွင့်အလမ်း လည်း မရခဲ့ဘူးလေ။ရွာမှာတော့ သူ့အမေရဲ့ အကို သူ့ဦးကြီးတယောက်ရှိနေဆဲဖြစ်ပေမယ့် အလွန့်ကို အိုမင်းနေပါပြီ။ ဘွန်ခမ်းဟာ သူ့ဦးကြီးကို လေးစားတန်ဘိုးထားကြောင်း ပြဖို့အနေနဲ့ လက်ဆောင်အဖြစ် နို့ဆီနှစ်ဘူးကို သယ်ဆောင်လာခဲ့တယ်။ လမ်းကကြမ်းတမ်းလွန်းပြီး နို့ဆီဗူး အပိုတွေက သယ်ဆောင်ရာမှာ လေးလံလွန်းမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ဘွန်ခမ်း အနေနဲ့ ဒီထက်ပို မယူလာနိုင်ခဲ့ပါဘူး။
`ရွာထဲက လူတွေက ခင်ဗျားကို မှတ်မိပါ့မလား´ ကျနော်မေးတော့
`ဘယ်သူမှ မှတ်မိမှာ မဟုတ်ဘူးဗျ၊ ဒါပေမယ့့် ဦးကြီးအိမ်နေရာကို ကျနော်တိတိကျကျ မသိ တော့ လို့ ရွာထဲက လူတွေဆီမှာပဲ မေးမြန်းစုံစမ်းရမှာဘဲ။´
ကျနော်တို့လည်း ဥယျာဉ်များ၊ သစ်သီးခြံများ ပေါများကြွယ်ဝမှုကို အံ့သြချီးကျူးရင်း ဟိုကြည့်၊ဒီကြည့်နဲ့ ဆက်လျှောက်လာကြတယ်။ အဲဒီလိုနဲ့ ကျနော်တို့ရဲ့ ဘယ်ဘက်မှာရှိတဲ့ ဥယျာဉ်တခုကနေ စုံလင်လှတဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်အပြည့်နဲ့ ပလိုင်းကို ပိုးထားတဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတဦး ထွက်လာတယ်။
`နေကောင်းရဲ့လား ဒေါ်ဒေါ်၊ ဘယ်နားမှာ နေတာလဲခင်ဗျ။´ ယဉ်ကျေးစွာနဲ့ ဘွန်ခမ်းက နှုတ်ဆက်ပြီးမေးတယ်။
`ဒီနားမှာပါပဲကွယ်´ ကျနော်တို့က မျက်နှာစိမ်းတွေဖြစ်တာကြောင့် သံသယရှိပုံရတယ်။ တွန့်ဆုတ်တွန့်ဆုတ်နဲ့ ပြန်ဖြေတယ်။
`ကျနော်တို့က မြို့ပေါ်ကလာတာပါ။ ကျနော်ကို ဒီရွာမှာ မွေးခဲ့တာပါ။ ဒါပေမယ့် ကျနော် ရွာကနေ ထွက်သွားတာကတော့ နှစ်တော်တော်ကြာသွားပါပြီ။´ ဘွန်ခမ်းက ရှင်းပြနေတယ်။ အမျိုးသမီးကြီးရဲ့ မယုံကြည်မှု ပျောက်ကွယ်စေဖို့ပေါ့။
`ဟုတ်လား။ အဒေါ်ကတော့ ဒီမှာ ကြီးသွားတဲ့ မင်းတို့အရွယ်ကလေးတွေကို မမှတ်မိတော့ ပါဘူးကွယ်။ ဒါနဲ့ ဘယ်သူ့ရဲ့သား ၊ ဘယ်သူ့ရဲတူလဲ။´
ကျနော်တို့နာမည်တွေကို ပြောပြတော့ ဘွန်ခမ်းက သူ့မိဘများရဲ့ နာမည်တွေရော၊ သူ့ဦးကြီးရဲ့ နာမည်ကို ပါ ထည့်ပြီး ပြောလိုက်သေးတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင် အမျိုသမီးကြီးက သူ့ဦးကြီးကို ကောင်းကောင်းသိတယ်။ ရွာတောင်ပိုင်းမှာ နေတယ်လို့လည်းပြောတယ်။ သူကတော့ ရွာ့မြောက်ပိုင်းမှာနေတဲ့ `အမေကြီးပွန်း´ (မယ့်ပွန်း-မယ့်ဆိုတာထိုင်းမှာ အမေကို ခေါ်တာပါ။ လော က ထိုင်းနဲ့နီးတော့ လော မှာလည်းဒီစကားက အမေကို ခေါ်တာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဘာသာပြန်သူ) ဖြစ်ကြောင်းလည်း မိတ်ဆက်ပါတယ်။ ဘွန်ခမ်းက ဒီနာမည်ကို မကြား ခဲ့ဖူးကြောင်း အမူအရာပြတယ်။ ဒါပေမယ့် စကားပြောတဲ့ အခါမှာတော့ သိခဲ့လေသယောင် ပုံစံမျိုးနဲ့ ပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်။ `အမေပွန်း၊ ကျနော်တို့ရွာရဲ့အခြေအနေကရော ဘယ်လိုလဲ´ လို့မေးတော့
အမယ်ကြီးက ရွာသူရွာသားတွေ အားလုံး အဆင်ပြေချောမွေ့ကြောင်း ပြန်ဖြေတယ်။ `သူတို့အားလုံး လုံလုံလောက်လောက်စားနိုင်ကြပါတယ်။ တယောက်တည်း လုပ်စာနဲ့ တအိမ်လုံးထိုင်စားလို့ရတယ်။ အသီးအနှံတွေကတော့ အများကြီးရောင်းရပေမယ့် အမြတ်က အရမ်းနည်းလွန်းတယ်ကွယ့်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးက ခက်ခဲတာကိုး၊´ အဲဒိလိုပြောပြီး လမ်းညာဖက်မှာရှိတဲ့ စပါးခင်းထဲကို ဆင်းသွားတယ်။ အိမ်က၀က်တွေအတွက် ၀က်စာကြိုဖို့ အပင်တွေ ခူးရဦးမယ်ဆိုပြီးတော့ ပြောသွားသေးတယ်။
ဘွန်ခမ်းက သူ့မှာပါလာတဲ့ နို့ဆီနှစ်ဗူးထဲက တဗူးကို ထုတ်ပြီး အမယ်ကြီးကို လှမ်းခေါ်တယ်။ ` ခဏလေး ဒေါ်ဒေါ်၊ ဒီနို့ဆီဗူးလေးကို ယူသွားပါ´လို့ပြောပြီးပေးတော့
`နတ်ကောင်းနတ်မြတ်စောင်မပါစေ၊ ငါ့သားရယ်´ ဆိုပြီး အမယ်ကြီး ဆုပေးတယ်။ ဆုပေးပြီးတော့ လမ်းခွဲထွက်ခွာသွားတယ်။
အလျင်ကလမ်းအတိုင်းပဲ ကျနော်တို့ဆက်လျှောက်လာကြတယ်။ ကျနော်ကတော့ ဘွန်ခမ်းရဲ့ ကြင်နာတတ်မှုကို ချီးကျူးနေမိတယ်။ သူ့ဦးလေးအတွက်ရည်ရွယ်ပြီး နို့ဆီနှစ်ဘူးကို ယူလာခဲ့ ပေမယ့် တဗူးကို လုံးဝမသိတဲ့ လူစိမ်းတဦးကို ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါ။
`ကျနော်တို့မိသားစုမှာ ဒါမျိုးလုပ်ဆောင်ဖို့အတွက် ကျနော်တို့ကို အမွေပေးခဲ့တာပါ။ အထူးသဖြင့် ကျနော်ကိုပေါ့။ ´ ဘွန်ခမ်းရဲ့ ပြန်ရှင်းပြတဲ့ စကားကြားရတော့ ကျနော့်မှာ ဂုဏ်ယူခြင်းရော၊ ၀မ်းမြောက်မှုပါ နှစ်ခုစလုံး ခံစားရတယ်။ `ကျနော့် အမေက ဒီလိုအလုပ်မျိုး လုပ်ဖြစ်ဖို့ သွန်သင်ပေးခဲ့တာပါ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတဦးကို တွေ့တဲ့အချိန်မှာ ကျနော်တို့ဆီမှာ အစားအသောက်တခုခု ပါလာခဲ့တယ်ဆိုရင် သူ့အတွက် ခွဲဝေ ပေးသင့်တယ် ဆိုတာကိုပေါ့။ နည်းတာများတာက အကြောင်းမဟုတ်ဘူး။ ဘယ်လောက်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ခွဲဝေ ပေးရမယ်။ ဒါဟာ ကျနော်တို့ရဲ့ ထိန်းသိမ်းရတဲ့ ရိုးရာအစဉ်အလာပဲ။ ဒီရွာက လူတော်တော်များများက ဒါကို လုပ်ကြတယ်။´
ဘွန်ခမ်းက ဆက်ပြောတယ်။ `အဖေက သူ့ကို အမေပြောခဲ့ဖူးတဲ့ ဇာတ်လမ်းတခု ပြန်ပြောပြ ဘူးတယ်။ အမေကျနော်ကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်ထားတဲ့အချိန်မှာပေါ့။ အမေက ရွာပြင်ထွက်ပြီး လမ်းလျှောက်ရတာကို ကြိုက်တယ်။ တရက်ကျတော့ လမ်းအတိုင်း အမေ လျှောက်နေတုန်း အမဲလိုက်ရာက ပြန်လာတဲ့ ကျနော်တို့ရွာသား လေးငါးခြောက်ယောက်နဲ့ သွားဆုံတယ်။ သူတို့က သမင်တကောင်ရလာတယ်။ အရည်ခွံလည်း ခွာပြီးသား။ အမဲလိုက်သူတွေအကြား ခွဲဝေဖို့အတွက် ခုတ်ထစ်နေတုန်း။ ဒါနဲ့ အမေ့ကို မုဆိုးတွေက သမင်သားဝေစု အများနည်းတူ ခွဲဝေပေးတယ်။ ကျနော်တို့ရဲ့ ရိုးရာအစဉ်အလာအရ ဒါဟာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တယောက်ရဲ့ အခွင့်အရေးပဲ။ အများဆုံးရတဲ့သူကတော့ သေနတ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ မုဆိုးပါပဲ။ သူက အခြားသူ တွေထက် နှစ်ဆရတဲ့အပြင် ခေါင်းရယ် ခြေလေးချောင်းရယ် အရည်ခွံရယ်ပါရတယ်။ ´
`အဲဒီညနေမှာပဲ ကျနော်မိသားစုဟာ ကြွယ်ဝခြင်းနဲ့ ကံကောင်းမှုအထိမ်းအမှတ်ဖြစ်တဲ့ သမင်သားကို စားကြတယ်။ နောက်နေ့မနက် အာရုဏ်တက်ခါနီးမှာ အမေဟာ ယောက်ျားလေး တယောက်ကို မွေးပါလေရော။ အဲဒီယောကျာ်းလေးက သူ့ရဲ့ဇာတိကို အခုလမ်းလျှောက်ပြီး ပြန်လာနေတဲ့ ကျနော်ပေါ့ဗျာ။ ´
ကျနော်တို့ အရမ်းကို စိတ်လှုပ်ရှားသွားကြတယ်။ စာနယ်ဇင်းသမားတဦးက `အဲဒီသမင်က ဘွန်ခမ်းဆိုပြီး ပြန်ဝင်စားတာ ဖြစ်နိုင်တယ်´ လို့ အရွှန်းဖောက်တော့
`ရွာသားတွေကတော့ အဲဒီလို ထင်ကြတာပဲ။ တကယ်လို့ အဲဒီသမင်ဟာ သေဆုံးပြီး နောက်သမင်တကောင်အဖြစ် ပြန်မွေးလာရင်လည်း ထပ်ပြီး အပစ်သတ်ခံရဦးမှာ သေချာသလောက်ပဲပေါ့။ ရွာသားတွေရဲ့ တဆင့်စကားကို ကျနော်ကြားရတာကတော့ ဒီဒေသက တောထဲမှာ သမင်တွေ မရှိသလောက်ဖြစ်သွားပြီ။´
`ဘယ်လောက်ဆိုးရွားလှတဲ့ ပျက်သုန်းမှုလဲ´ ကျနော်အလန့်တကြားရေရွတ်မိတယ်။ ဘွန်ခမ်းက သူ့ဇာတ်လမ်းကို ဆက်ပြောတယ်။
`ကိုယ်ဝန်ဆောင်တဦးဟာ သူ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲက သူ့ရင်သွေး အာဟာရ ဖြစ်ဖို့အတွက် အစားအသောက်ကို ပုံစံတကျ လုံလုံလောက်လောက် စားဖို့လိုပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင် မိခင်တဦးဟာ အစားအစာပါလာတဲ့ တစုံတဦးကို ဆုံမိရင် ဆင်တကောင်လုံးကိုတောင်မှ စားပစ်နိုင်သလိုမျိုး အလွန်အမင်းဆာလောင်လာတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တဦးက ကျနော်ကို ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြောခဲ့ဘူးသေးတယ်။ တစုံတယောက်က သူ့ ကို အစားအသောက်ရှိရက်နဲ့ မခွဲဝေပေးဘူးဆိုရင် အဲဒီလူကို ဘယ်တော့မှ မမေ့တော့ဘူး။ သူ့အပေါ် ကြင်နာမှု မရှိတဲ့သူဆိုပြီး အဲဒီလူအပေါ် ခါးခါးသီးသီးဖြစ်မှုက ရှိနေလိမ့်မယ်။ ကျနော့်အဖေအပြောအရ အမေဟာ အပစ်သတ်ခံခဲ့ရတဲ့ သမင်အတွက် အလွန့်ကို စိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့တယ်တဲ့။ သူကိုယ်တိုင်လည်း နောက်ပိုင်းသမင်သားကို ဘယ်တော့မှ မစားတော့ဘူး။ ဒါပေမယ့် သူရတဲ့ ဝေစုကိုတော့ အိမ်သားတွေအတွက် ယူလာလေ့ရှိတယ်။ ဒါမှသာ အသားစားဖို့ အခွင့်အလမ်း အိမ်သားတွေရမှာကိုး။ ကျနော့်ကို မွေးပြီးတော့ အမေဟာ အရမ်းကို ကျနော့်ကို ချစ်တယ်။ ကြင်နာတယ်။ ဒါပေမယ့် အမေဟာ သူ့ အချစ်ဆုံးသားတယောက် လူလားမြောက်ပြီး ပျော်ရွှင် နေတဲ့ မျက်နှာကိုတော့ တွေ့မြင်ရဖို့ အခွင့်အလမ်း ဘယ်တော့မှ မရတော့ပါဘူး။ ကျနော့်ကို ဘွန်ခမ်း လို့ အမည်ပေးခဲ့ပေမယ့် အမေကတော့ `ငါ့အချစ်ဆုံးလေး´ ဒါမှမဟုတ်ရင် `မေမေ့ အချစ်ရဆုံးလေး´ လို့ ခေါ်ရတာကိုပဲ နှစ်ခြိုက်တယ်။ ´
အဲဒီအချိန်မှာ ကျနော်တို့ဟာ ရွာထဲဝင်တဲ့ ဂိတ်တံခါးအနားကို ရောက်နေပါပြီ။ လမ်းကတော့ ကြမ်းလွန်းလှပါတယ်။ ဘွန်ခမ်းရဲ့ ဇာတ်လမ်းကို နားထောင်ပြီး မိခင်လောင်း ထွက်သွားရာ ဘက်ကို နောက်ပြန်လှည့်ကြည့်မိတော့ လယ်ကွင်းထဲမှာ သူရဲ့ ပုံရိပ်က ပျောက်ကွယ်လုဆဲဆဲ။ ဒါပေမယ့် ကျနော်မှတ်ဥာဏ်ထဲမှာတော့ သူဟာ စွဲထင်ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီကမ္ဘာထဲကို ၀င်ရောက်လာမယ့် အလွန်သေးငယ်လှတဲ့ လူသားတဦးအတွက် ကူညီဖို့ ခွဲဝေပေးရမယ့် တာဝန် ရှိတယ် ဆိုတဲ့ အသိတခုကို ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ကျနော် ခံစားခဲ့ရတယ်။
posted by မြင့်ဇေ @ 9:49 AM0comments
တိုင်းရင်းသားပါတီများမှ အမျုိးသားညီလာခံအပေါ် ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်
posted by မြင့်ဇေ @ 11:47 PM0comments